Banky Offshore: Nahoana ny olon-tsotra no nanangana kaonty any amin'ny banky
Offshore Banking and Protection
Tsara ny mieritreritra an'izao tontolo izao ho toerana mahafinaritra izay tsy ahafahanao miatrika olana ara-dalàna mihitsy. Na izany aza, raha mandalina ny antontan'isa ianao, dia ho hitanao fa misy ny fotoana mety hahafahana misimisy fanenjehana amin'ny tananao. Misy mihoatra ny iray. Raha ny filazan'ny mpisolovava Jay Mitten, ny olona salanisan'ny olona ao Etazonia dia miatrika lalàna fito mandritra ny androm-piainany. Miaraka amin'izany, tonga ny mpisolovava iray tsy voarohirohy mampiditra solika ary mampandrehitra ny olan'ny olanao.
Azo inoana kokoa aza izany ho an'ny olon-tsotra izay manana ny orinasany. Noho izany, ny fitoriana tsy ampoizina - angamba ny ezaka fanararaotana handraisana ny harenanao — dia azo atolotra anao amin'ny fotoana rehetra. Ny zavatra iray dia azo antoka ho an'ny ankamaroan'ny olona. Tsy maninona na misy olana eo amin'ny sehatry ny asa na raharaha manokana. Mety ho fisaraham-panambadiana, na olana momba ny hetra mihitsy aza. Isaky ny misidina eny amin'ny fitsarana ianao dia te hiaro anao ny fanananao, na fara-faharatsiny ny sasany amin'izy ireo. Raha izany dia maro ny mitodika offshore bank natambatra tamin'ny fitaovana ara-dalàna tokony hiarovana ny fananany avy amin'ireo loza mahatsiravina toy izany eo amin'ny fiainana.
Nahoana no banky any ivelany?
Noho izany, maninona ny olona no manokatra kaonty any amin'ny banky? Ny United States dia manana 4.2% amin'ny mponina manerantany. Na izany aza, manana 80% amin'ireo mpisolovavan'izao tontolo izao sy 96% amin'ireo hetsik'izao tontolo izao. Noho izany, fiarovana no anaran'ilay lalao ho an'ny amerikana satria io no fandrahonana mahatsiravina indrindra amin'ny vola ara-bola. Ny ankamaroan'ny olona mamindra ny renivohitra manokana ivelan'ny firenena dia mifantoka amin'ny foto-kevitra momba ny fiarovana ny fananana. Ambonin'izany, tsapan'izy ireo fa ilaina ny miaro ny tanjony mety hitranga amin'ny fandrahonana ho avy - mpampindram-bola, mpisandoka, ary fisaraham-panambadiana. Ny ankamaroan'ny fanafihana ara-dalàna dia avy any Etazonia.
Maniry hampiasa kaonty any ivelany koa izy ireo hanamaivana ny fandoavan-ketra. Ny ankamaroan'ny vola miditra dia avy amin'ny firenena hafa. Ny US dia mandoa ny mponina ao amin'ny vola miditra manerantany. Na izany aza, ny orinasa toa an'i Apple sy ny ampingan'ny Google dia mamatsy vola any ivelany ary mankafy ny tahiry hetra be. Tsy toa an'i Etazonia, ny firenena sasany dia tsy mandoa hetra amin'ny olom-pirenena amin'ny fidiram-bola eran-tany. Ny olona rehetra dia tsy afaka manararaotra an'io, na izany aza, mitadiava toro-hevitra momba ny hetra alalana aloha. Aza averimberina ihany koa fa mamorona paikady momba ny hetra “tokony ho an'ity fomba ity” izany. Makà toro-hevitra momba ny hetra nahazoana alalana.
Ho an'ny olona mandray anjara amin'ny fiarovana ny fananana dia matetika mametraka ireo fananana ireo ao amin'ny iray amin'ireo fanjakana kely sy mahaleo tena izy ireo. Ireo faritra ireo dia mahita tsenan'ny vahiny liana vonona amin'ny serivisy ho an'ny banky any ivelany. Ny ankamaroan'ireny firenena ireny dia misy lalàna manala ny fananana amin'ny fitsarana. Fanampin'izany, ny faritra sasany dia afaka manome tombony manokana amin'ny fiainana any amin'ireo mpampiasa vola amin'ireto kaonty ireto. Mazava ho azy fa ny lalàna dia manery ny olona hanaraka ny lalàn'ny fireneny.
Ny fiarovana ny Asset indraindray dia misy endrika vitsivitsy. Na dia maro ny safidin'ny sasany aza, ny fiara any ivelany dia mahomby kokoa amin'ny tanjon'ny fiarovana ny fananana. Raha ny tokony ho izy, ny fahatokisan-tena any ivelany dia manome izay betsaka indrindra amin'ny fiarovana ny fananana. Ary tsarovy, raha mahatsiaro tena ho meloka ianao amin'ny fanaovana an'io lalana io dia aza atao. Rehefa dinihina tokoa, dia anjaranao resahinay — ireo izay niasanao mafy mba hananana.
Fantaro fa amin'ny fotony, ny fiarovana ny fananana dia tsy zavatra hafa ankoatry ny fitantanana risika. Toy ny mividy politika fiantohana; ary matetika miaro sy mahomby kokoa. Raha toa ka manao asa aman-draharaha anio, takatrao ny manasarotra ny fitadiavam-bola. Noho izany, ny fananganana manda iray izay samy miaro ny vokatry ny asanao ary manavotra anao vola dia azo inoana fa ho hendry.
Raha manana orinasa mihoatra ny iray ianao dia tsy mila fitakiana mivoaka avy amin'ny orinasa iray mety hiteraka loza ho an'ny hafa. Raha izany dia mety te-hieritreritra fisainana manokana ho an'ny orinasa tsirairay ianao. Ity fomba fiasa ity dia mametraka ny orinasan'ny tsirairay amin'ny lavaka cubby tsirairay avy. Amin'izany fomba izany, ny fanenjehana amin'ny orinasa iray dia tsy hanimba ny empira iray manontolo. Ho fanampin'izay, manamafy ny tanjaky ny paikady fiarovana amin'ny fanananao ianao raha manao izany any ampitan-dranomasina. Inona àry no safidinao amin'ny fiarovana ny fananana any ivelany?
Nevis sy ny Asset Protection
Nevis dia iray amin'ireo toeram-pandraisana voalohany teo amoron-dranomasina tamin'ny andro maoderina nanolotra fiarovana ny fananana sy lalàna momba ny fiainana manokana. Fomba iray hanandrana sy handanjalanjana ny mety hisehoan'ny fandraharahana orinasa maro. Ny orinasa ao Nevis dia afaka miaro ny fanafihan'ny fitsikilovana izay mety ho avy amin'ireo mpisolovava tsy mahomby. Mampiasa serivisy orinasam-pifandraisana, toa an'ity iray ity, dia afaka mametraka orin'asa ivelan'ny tanàna ianao. Ny fampifangaroana azy amin'ny fahatokisana an-tanety sy / na fototra eny amoron-dranomasina avy amin'ny fanapaha-kevitra samihafa manerana izao tontolo izao dia ahafahana manamaivana ny famerana.
Matetika ny manam-pahaizana dia manoro hevitra ireo orinasa eo amoron-dranomasina Nevis satria ny lalàn'izy ireo dia mankasitraka ny fiainana manokana sy ny fiarovana ny fananana. Ny Nevis LLC, amin'io fanoratana io dia manolotra lalàna mahomby indrindra amin'ny fiarovana ny fananana any amin'ny orinasa any ivelany.
Fa maninona no Nevis?
Ireto misy antony mahatonga ny Nevis LLC (indrindra fa rehefa mitambatra amin'ny fahatokisana Nevis) dia fitaovana fiarovana miaro tena:
Ny iray dia mila mametraka fatorana $ 100,000 alohan'ny hametrahana fitoriana hanameloka ny fitsarana ny olona iray ao amin'ny Nevis LLC.
Ny famindrana hosoka ny lalàna momba ny fetra dia roa taona fotsiny. Midika izany fa rehefa mametraka fananana ao amin'ny Nevis LLC ianao, roa taona aty aoriana dia tsy handre izany raharaha izany ny fitsarana Nevis.
Etsy an-daniny, mila manaporofo mihoatra ny fisalasalana azo antoka ny tompon'ilay Nevis LLC izay namatsy ny LLC mba hitazomana ny fananana amin'io mpampindram-bola io.
Fiarovana Asset izay miaro ny mpampindram-bola tsy hisambotra ny orinasa na ny fananany dia omena ny mpikambana tokana ankoatry ny LLC-mpikambana marobe.
Na dia mahazo didim-pitsarana aza ny olona iray, maharitra ao anatin'ny telo taona ary tsy afaka manavao izany ilay mpampindram-bola.
Na matanjaka kokoa aza noho ny Nevis LLC dia ny fiarovana ny fananana Nevis. Mba hametrahana azy amin'ny teny mahery kokoa, ny Matoky i Nevis dia iray amin'ireo fitaovana fiarovana mahomby indrindra eto amin'izao tontolo izao. Rehefa nilaza ny fitsarana amerikana hoe "mamerina ny vola" ny tompon'andraikitra any ivelany dia manao hoe: "miala tsiny fa tsy manana fahefana eto ianao." Rehefa mametraka ny fitokisan'ny Nevis izahay dia nametraka Nevis LLC. Amin'izay fomba izay, ny mpanjifa no mpandrindra ny LLC rehefa tsara ny fotoana. Avy eo rehefa tratran'ny fanafihana ara-dalàna izy, dia afaka miditra sy hametahana ny fiarovana fiarovana ny fananana ny mpitantana (firaketana lalàna ao Nevis).
Belize sy ny fiarovana amin'ny angovo
Manome fananganana orinasa any ivelany sy banky any ivelany i Belize. Taorian'ny Nevis, dia iray amin'ireo safidy tsara kokoa amin'ny fiarovana ny fananana sy ny fiainana manokana. "Belize dia iray amin'ireo firenena izay hidirako hanafina ny volako ary hiaina raha toa ka mila izany aho," hoy i Dennis Lormel, filohan'ny sekretera ara-bola ao amin'ny FBI. "Ny zava-misy dia ny ho voaro any aho, ary ny governemanta (Etazonia) dia mety tsy hahavita hanaisotra ahy na hiditra amin'ny kaontiko amin'ny banky." Mazava ho azy fa ny toro-hevitra fotsiny dia ampiasao ny fampiasana banky any ivelany. ho an'ny iray amin'ireo antony ara-dalàna sy ara-dalàna maro.
Aorian'i Nevis, ianao Belize LDC Miaraka amin'ny Finoana matoky dia roa amin'ireo fitaovam-piarovana mahery vaika mahery vaika eran-tany. Ity no antony.
Nahoana no Belize?
Ny fandraisana anjara amin'ny vola (vola natokana hananganana LDC) dia tsy voavidy amin'ny fangatahana famindram-po amin'ny mpampindram-bola.
Ny fitsipiky ny fetra voafetra amin'ny fantsom-pifidianana hosoka ho an'i Belize LDC dia fohy dia fohy. Iray taona monja avy amin'ny nananganana azy sy nanangonany vola na roa taona monja taorian'ny nanakaratana ilay vola.
Ny fahatokisan'ny Belize dia manana tombony mitovy ary mahery kokoa noho ny LDC. Matetika izahay dia nametraka fitokisana Belie miaraka amina Belize LDC ao anatiny. Tahaka ny Nevis LLC, ny mpanjifa no tompon'andraikitra amin'ny Belize LDC mandra-pahatongan'ny “zavatra ratsy”. Ary rehefa manafika ny mpampindram-bola, dia matoky ny fiarovana ny fananana i Belize. Ny tribonaly anao dia tsy manana fahefana momba ireo mpitokona Belize. Noho izany, tsy vitan'izy ireo ny hanaiky ny mpitantana.
Ny lalàna mifehy ny famerana amin'ny famindrana sandoka amin'ny fahatokisana Belize dia fohy araka izay azo atao. Ho an'ny fisaraham-panambadiana na lova dia mitaky ny fetran'ny fetra voafetra. Izany hoe raha vao mamindra ny fananana toy izany ao anaty fitokisana ny olona, ​​ny fiarovana dia miaro azy ireo.
Arovy ny anjaranao
Raha te-hitrandraka ny fanananao amin'ny fangatahana mpisolovava tsy marina ianao dia mila manombatombana ny loza mety hitranga ianao ary ny sandany sy ny karazana toetranao. Ny drafitra ara-bola any ivelany dia manolotra safidy marobe tsy hita ao an-trano. Hanombohana, alohan'ny hamoanao ny drafitra mandroso mba hiarovana ny fanananao manokana, eto no tokony hatao. Voalohany, tsy maintsy ataonao antoka fa manana fototra mafy sy miaro fiarovana mafy ianao.
Raha ny tokony ho izy dia tsy maintsy apetraho ao anaty fitaovana ara-dalàna ny fananana. Ankoatr'izay dia tsy maintsy misafidy ny fanapahana sahaza anao ianao mba hahazoana fiarovana. Azonao atao ny manitatra ny fanananao ao anatin'ireo fitaovana ara-dalàna ao amin'ny banky izay eo amin'ny sehatra tsy eken'ny fitsarana vahiny. Mahitsy sy miorina haingana. Ankoatr'izay, amin'ny fanaovana izany dia afaka miaro ny fanananao sy ny mombamomba anao ianao rehefa manao asa an-tserasera. Ampahafantaro anay fa ny fanirianao ary dia hasehontsika anao ny fomba.
The Ny nosy Cook ao Cook or Matoky i Nevis narahina amina offshore LLC ao anaty ny fifampatokisana dia fifangaroana tsara. Araka ny voalaza etsy ambony, rehefa mangataka ny hamerenanao ilay vola ny fitsarana amerikana, ny rafi-pitondrana any ivelany dia mahazo mandà tsy hanaraka.
Ny orinasa Shadow amin'ny fiarovana ara-bola
Mahaliana fa ny Tribune-Review dia nanamarika fa manodidina ny dimampolo isan-jaton'ireo varotra rehetra eran-tany no manatanteraka ny lalan-ketra. Ny fandaniana hetra amin'ny hetra ho an'ny banky ivelan'ny banky dia mahazo kaonty banky tsy miankina amin'ny anaran'ny orinasa iray. Noho izany dia miaro ny vola amin'ny olona rehetra izay tianao hividianana vola. Anisan'izany ny mpampindram-bola, mpisolovava, mpivady taloha, na olon-kafa.
"Ny fananana orinasa tsy fantatra anarana dia tena ilaina amin'ny hetsika maro ... ary ny fahazoana orinasa tsy mitonona anarana dia mora," hoy i Jason Sharman, akademika amin'ny banky any ivelany any Griffith University any Australia. Ny fanaovana orinasa dia mety haingana sy mora. Raha ny marina dia io no mampiavaka manokana antsika ary mandritra ny andro fiasana, ny orinasantsika dia manangana orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana isanandro. Ny fahazoana kaonty any ivelany ho an'ny orinasanao any ivelany dia mety mila fotoana sy ezaka bebe kokoa. Noho izany dia mitadiava fanampiana avy amin'ny olona manana traikefa eo amin'ny orinasa. Indray, ity koa ataontsika isan’andro - manampy ny mpanjifa hanokatra kaonty any ivelany. Raha manao toy izany koa ianao, dia azo inoana fa tena mahasoa anao izany rehefa miaro ny tenanao amin'ny fanafihana ara-bola.
Ny kaonty banky any ivelany dia mitaky afa-tsy roa arivo dolara fotsiny amin'ny fametrahana azy ireo. Ny hafa, indrindra ny kaonty banky Swiss, dia mila vola be dia be hamatsy vola. Banky Soisa matetika mitaky $ 250,000 ka $ 1 tapitrisa hanokatra ny kaonty.
Ny Trust Offshore ho an'ny fiarovana amin'ny angovo
Ny drafitry ny fiarovana ny fananana any ivelany dia nanjary lohahevitra niteraka adihevitra tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ny drafi-piarovana tena tsara indrindra dia ny fahatokisana tsy azo ovana amin'ny fananana hery manokana amin'ny fanendrena. Izany dia satria tsy jeren'ny lalàna ny fananana fahatokisana ho fananan'ny Settlor. Aza hadino foana fa, rehefa mividy ny fahatokisana dia tsy mividy fahatokisana fotsiny ianao. Ankoatr'izay, ianao mividy ny traikefan'ny olona manoratra ny fahatokisana.
Mba hiarovana anao, ny matihanina dia tsy maintsy mamolavola azy io mifanaraka amin'ny traikefa momba ny lalàna momba ny raharaha sy ny tena tranga. Noho izany, tsy hoe atao azy io irery io. Makà fanampiana. Rehefa dinihina tokoa, ity no vola. Misy karazany ny fahatokisan-tena. Ny karazana tsirairay dia manana tanjona na tanjony manokana.
Ny fahazoana fitokisana any ivelany dia mety ho safidinao tsara indrindra momba ny fiarovana ny fanananao. Raha ny marina dia hitanay ny fitokisana any ivelany izay ny fitaovana matanjaka indrindra azo alaina.
Ny olona matoky ny mpizara dia lavitra noho ny fisorohana ny mpampindram-bola mahazatra. Ohatra, manao an'izay olona mitady hanala ny harenany izy ireo amin'ny tranga fanonerana mpiasa. Azontsika atao ihany koa ny mampiasa azy ireo hiarovana ny fanananao amin'ny mpisolovava tsy voarohirohy nangataka fatiantoka fiara, afo manimba izay simba kokoa noho ny fandrakofana fiantohana, sns
Tahaka ny teknika fiarovana amin'ny fananana hafa, tsara indrindra ny mametraka ny fahatokisana alohan'ny hisian'ny famonoana olona. Amin'izay dia afaka miaro anao tsara indrindra ianao. Eny, afaka mampiasa azy io ianao ho fiarovana mimanda. Fa mialoha ny drafitra dia mety. Ny fifampatokisana any ivelany, noho io tanjona io, dia namboarina ho fahatokiana fiarovana amin'ny fananana. Izany hoe, ny tanjona farany dia ny fiarovana ny fanananao.
Na dia mety hanome fahafahanao drafitra fiarovana amin'ny fananana aza ny fahatokisan-tena any ivelany, tokony handinika tsara an'io safidy io ianao. Tokony ho azonao antoka fa manana traikefa ny mpamatsy tolotra ary hamorona azy io araka ny tokony ho izy. Fanampin'izay, ny fikambanana iray manana fifandraisana maharitra amin'ny mpitam-pitokisana dia tokony hitarika ny famoronana azy.
Ny famindra ny fananana ivelan'i Etazonia ho fitokisana manerantany mba hisorohana ny mpampindram-bola amin'izao fotoana izao tsy hangonina famindrana hosoka. Saingy, resaka ady an-trano ihany izany fa tsy misy fiantraikany amin'ny heloka bevava amin'ny ankapobeny. Ny teny tsara kokoa ho an'io fehezanteny io dia "fifanakalozana tsy misy fotony." Raha ny marina, ity no fehezan-teny marina ampiasain'ny Komitin'ny Lalàn'ny Uniform. Izany dia satria teny hosoka finiavana mitarika ireo tsy nampiova hevitra ny fisainana izay matotra kokoa noho ny tena izy.
Lalàna mifehy ny Banky Offshore
Raha ny tokony ho izy, dia misy trondro iray miaraka amin'ireo kaonty fampiasam-bola any ivelany ity. Izany dia ny fanaovana antoka fa hanaraka ny lalàna mifehy ny hetra i Etazonia. Ireo lalàna ireo dia ahitana ny fanamafisana antoka fa hanao zavatra toy:
Mitatitra ny famindrana rehetra ho lasa fahatokisana vahiny amin'ny IRS.
Ny fizarana avy amin'ny fitokisana any ivelany izay azon'ny Amerikanina iray dia mety handoa hetra ho an'io olona io.
Ny vola miditra rehetra tsy voaangona dia azo alaina ho fidiram-bola.
Kaonty ho an'ny vola azo ampitomboina ao anaty fitokisana any ivelany izay mety noforonina tamin'ny taona lasa. Raha tsy izany, ny fizarana mety hiteraka ny Amerikanina handoa hetra arak'izany taona izany. Mitovitovy ihany amin'ny taham-bola io tamin'ny taon-dasa. Raha tsy voalaza ny vola teo aloha, dia mety hoterena handoa ny sazy sy ny zana-bola ianao. Ny farany dia ny fidiram-bolan'ny any ivelany dia tsy miandany amin'ny hetra. Tsy mandoa hetra na mihoatra ny hetra ianao raha mitazona ny volanao any ivelany na any ivelany.
Ny IRS dia mangataka anao (na ny CPA anao) hametraka endrika tax tsotra. Ny endrika dia manazava ny lanjan'ny fananana ao anaty antoka. Ankoatr'izay dia hataonao anarana ny tena mpahazo ireo andry tokana. Raha tsy nahavita nametraka an'ity tatitra ity ianao dia mety hahazo karama, ankoatry ny zavatra hafa, ny sarany farany amin'ny $ 10,000. Raha tsy mahavita manolotra ny tatitra tanteraka ianao dia mety hivoatra kokoa. Noho izany dia aza hadino ny mameno ny kaontinao amin'ny alàlan'ny fotoana.
Raha atao teny hafa dia tsy miraharaha ny IRS raha toa ka manana kaonty tany ivelany ianao. Ny fananana kaonty any ivelany dia tsy manangana "saina mena", araka ny fiheveran'ny sasany azy. Izy ireo ihany no miahy fa mitatitra ny vola miditra aminao. Na mahazo tombom-barotra eny amoron-tsiraka ianao na eny ivelany, dia mitenena izay azonao. Noho izany dia tsy am-pivoahana na avy any ivelany izay manan-danja amin'ny IRS. Ny fitaterana ny vola miditra aminao no zava-dehibe, na aiza na aiza misy azy ireo.
Torohevitra momba ny hetra amin'ny lafin'ny oniversite sy ny hetra azo antoka
Misy toro-hevitra lehibe momba ny hetra tokony ho fantatrao amin'ny maha mpanome, famindrana, na mpanatanteraka amina trano vahiny. Ireo fananana mivezivezy any anaty fitokisan'ny firenena vahiny ary koa ireo mpahazo tombontsoa avy any Etazonia dia tokony hahafantatra ireto vaovao manaraka ireto. Toy izany koa, raha mitazona ny fanananao vahiny toy ny amin'ny orina iraisam-pirenena ianao, dia misy zavatra hafa tokony ho fantatrao. Raiso am-pitandremana manokana, raiso ny fepetra mety raha latsaka amin'ireto sokajy manaraka ireto ianao:
Mpandray anjara ianao amin'ny fananana 10% na mihoatra ny orinasam-barotra any ivelany. Fanampin'izany, maherin'ny antsasaky ny tahiry amin'ny orinasa dia manana tompona Amerikana dimy na vitsy kokoa.
Amerikana dimy na vitsy kokoa no voarohirohy amin'ny kaontin'ny orinasa any ivelany. Ankoatr'izay, 60% ary ambonin'izany vola miditra ao amin'ny orinasa izany dia avy amin'ny fampiasam-bola.
Ianao dia manana fifehezana sharehold amin'ny offshore company mitazona ny 50% na mihoatra ny fiasa amin'ny fananana fampiasam-bola. Ankoatr'izay, manao 75% ianao ary mihoatra ny vola miditra miaraka amin'ny fidiram-bola mitovy amin'izany.
Misy marina ve ny eo ambony? Raha izany no izy dia mila azonao antoka fa mitatitra ny vola miditra amin'ny fiverenanao amin'ny hetra manokana. Ka alao ho anao ny manatona consult CPA za-draharaha amin'ny orinasa iraisam-pirenena. Ny ankamaroan'ny CPA mahay fahalalana amin'ity kianja ity dia avy any amin'ireo tanàna lehibe izay misy olona manankarena. CPA mpifanila trano aminao avy any Bugtussle, mety ho eo an-dohany i Kentucky. Mbola afaka mampiasa ilay lehilahy na gal ianao eo an-toerana ho an'ny famoahana fototra. Fa ho an'ny filma amoron-tsiraka, dia mitadiava olona mahalala ilay faritany.
Mazava fa tokony hametraka fitokisana fiarovana ny fananana any ivelany ianao raha vao misokatra ny masonao. Manolotra fomba hametrahana ny fanananao mihoatra ny tratry ny mpampindram-bola izy io. Noho izany, miaraka amin'ny drafi-tsaina matotra ary ny fahatsiarovan-tena momba ny fanondranana hetra isam-batan'olona, ​​dia afaka manao tsara ianao. Fanampin'izay, afaka manafina ny fanananao amin'ireo mpisolovava tsy marina ianao. Matokia fotsiny, misy fomba mahomby sy matanjaka mba hiarovana ny tenanao amin'ny loza ara-dalàna. Noho izany dia olona maro hafa no manao izany isan'andro.
Dr. Christ Nelson
<Ho an'ny toko 5
Ho an'ny toko 7>